Qiimeynta App ee Macallimiinta 2021: 10 Barnaamijyada Abaalmarinta Abaalmarinta ee Macallimiinta: Akhbaaraha Iskuulka ee Hadda
Qiimeynta App ee Macallimiinta: Kororka tiknoolajiyada moobiilka ayaa runtii kiciyay barasho iyo barasho kacaan aan horay loo arag. Teknolojiyadaha moobiillada ayaa baabi'iyay xudduudaha, waxay fureen fursado waxbarasho oo cusub, iyo, tan ugu muhiimsan, waxay kala dheereeyeen fursadaha barashada si loogu daro meesha bannaan.
Tan waxay ku imaanaysaa dabacsanaan iyo sidoo kale dheecaan ku saabsan dhaq dhaqaaqa ku-meel-gaadhka ah ee ku xeeran barashada.
Sidaas darteed, culeysyo badan oo kheyraad waxbarasho ayaa laga helay meel kasta waqti kasta. Saxitaanka imtixaanada, shaqooyinka iyo waraaqaha gacanta ayaa umuuqda kuwo culeys badan iyo waqti qaadis badan. Maxaa diidaya inaad gacan gacan ka geysato tiknoolajiyadda?
Maqaalkan, waxaan ku taxan doonaa qaar ka mid ah barnaamijyada qiimeynta cabsida leh ee ka caawin kara macallimiinta inay waqtiga ilaashadaan.
Shahaadada Aqoonsiga Macallimiinta
1. Degdeg ah
Kani waa kalkuleytar gacan ka geysta xisaabinta dhibcaha imtixaanka iyo boqolleyda. 'QuickGrader waa casriyeyn weyn oo laga soo qaaday xisaabiyayaashii hore ee xisaabinta buundooyinka, oo ay ku jirto is dhexgal si buuxda loo habeyn karo oo ay ku jiraan dhammaan astaamaha awoodda badan ee looga baahan yahay fasalka casriga ah oo ay ku jiraan qiimeyaasha nuska dhibcaha.
Sidoo kale, miisaanka fasalka la hagaajin karo, oo lagu daray / laga jaray qiimeynta, iyo is dhexgal saaxiibtinimo oo indhaha ku fudud. QuickGrader sidoo kale waxay ka hortageysaa shaashadda inay si otomaatig ah u yaraato, taas oo kuu oggolaaneysa inaad diirada saarto darajo bixinta. '
2. Macallin Bulsho
Barnaamijkan macallimiintu aad ayey ugu talinayaan, waana sahlan tahay in la arko sababta? Sababtoo ah waxay gacan ka geysan kartaa abuurista xulashooyin badan ama su'aalo furan oo furan iyo waliba codbixin lala wadaagi karo macallimiinta kale.
Waxay ka caawineysaa qiimeynta, bixinta qiimeyn guud si loo arko haddii ardaydu ku dhibtoodayaan aag gaar ah, waxayna sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad soo dejiso natiijooyinka.
Kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso leh u abuurto imtixaannada qiimeynta qaab dhismeedka iyo su'aalaha sidoo kale waxay ku siinaysaa nidaam qiimeyn deg deg ah si aad u aragto xogta natiijooyinka oo aad u go'aamiso 'fursadaha waxbarid dheeraad ah'.
3. Fasal Google
Tani waa codsi kale oo heer sare ah oo dijitaal ah oo leh astaamo waxtar u leh macallimiinta iyo ardayda. Fasalka Google 'waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo macallimiinta inay abuuraan, ururiyaan oo ay calaamadeeyaan shaqooyinka waraaqo la'aan, oo ay ku jiraan astaamaha waqtiga lagu badbaadinayo sida awoodda si otomaatig ah nuqul uga sameysan kara Dukumentiga Google arday kasta.
Waxay sidoo kale u abuureysaa faylal Drive ah meele kasta iyo arday kasta inuu gacan ka geysto sidii qof walba loo abaabuli lahaa. '
Tani sidoo kale waa xisaabiyaha kale ee shahaadiga ah oo aad u wanaagsan oo la yimaada farabadan astaamo ay ka mid yihiin awood u lahaanshaheeda si uu ula shaqeeyo wax ka badan 100 su'aalood, muujiyo buundooyin sida tirooyinka oo dhan ama hal meel jajab tobanle ah, u abaabulo natiijooyinka tiirar iyo waxyaabo badan oo dheeri ah.
ZipGrade waa barnaamij qiimeyn ah oo kaa caawinaya inaad ku dhibco imtixaanno badan oo xulasho ah daqiiqado. Si fudud ku tijaabi imtixaanada casrigaaga, barnaamijkuna inta kale ayuu sameeyaa.
Dabcan, wax walba kuma saabsana darajooyinka. Barnaamijkan wuxuu kaliya siinayaa buundooyin; adiga ayay kugu xidhan tahay inaad ogaato waxay ardaydu u baahan yihiin iyo su'aalaha ay tahay inaad mar labaad sharraxdo.
Hab fudud oo waliba hab fudud oo lagu abuuri karo su'aalo iyo imtixaanno iyo ardayda beerta ah ayaa ku shaqeeya socodka. Waxay bixisaa xaashiyo jawaabo bilaash ah oo lagu heli karo qaabab iyo cabirro kala duwan, waxay abaabushaa natiijooyinka qiimeynta ee Excel iyo PDF qaabab saaxiibtinimo, waxay ku habeeyaan buundooyinka ardayda magacyo iyo waxyaabo kaloo badan.
Showbie waa barxad kulmisa dhammaan aaladaha lagama maarmaanka u ah meeleynta, wada xiriirka iyo waliba jawaab celinta. Showbie waxay leedahay buug tilmaame wax ku ool ah oo leh astaamo kale oo badan.
Waad calaamadeyn kartaa oo aad ku qori kartaa shaqada ardaydaada adoo adeegsanaya liiska fasalka ee ku jira Faylka Wadaagga ah, fasalka si dhib yar fasalka ayaa u shaqeeya inta aad daawaneysid, waxaadna ku dari kartaa buundooyin qiime ahaan.
Waxaad sidoo kale ku dari kartaa qoraal macno leh oo la socda ra'yi celin. Waxa kale oo aad leedahay qol aad ku darto faallooyinka qoraalka. Laakiin waqtiga-badbaadiyaha dhabta ah waa awoodda lagu daro ra'yi-celinta maqalka: kaliya rikoodh garaac!
Waa suurta gal in si dhakhso leh loogu fiiriyo fasalada ardayda meelaynta, fasalka ama shaqsi ahaan. Iskusoo wada duuboo, waxaad ku dhoofin kartaa buundooyinka feylka CVS, sida HTML, ama shaxanka emaylka oo ay ku jiraan faylka CVS ee ku lifaaqan.
Showbie waxay bixisaa tiro barasho ah iyo sidoo kale aaladaha maaraynta fasalka. Macallin ahaan, waxaad u adeegsan kartaa nidaamkeeda qiimeynta si aad u saxdo shaqooyinka ardayga aadna u siiso qoraal ahaan, muuqaal, iyo maqal deg-deg ah.
7. Macalin Caawiye Pro
Macallin Caawiye Pro waxaa ku jira saddex astaamood oo waaweyn: raadraaca imaatinka, buuga buundada iyo shaxda fadhiga.
Buugga buundada wuxuu ku taageeraa illaa 10 fasallo oo lacag la’aan ah. Helitaanka astaamaha dheeraadka ah waa $ 0, 99 bishii.
Kani waa barnaamij pro ah oo u ogolaanaya macalimiinta, ardayda iyo waliba waalidiinta inay la socdaan waxyaabaha sida darajooyinka, macluumaadka xaadiritaanka, iyo qoraalada. Waxay sidoo kale ka shaqeysaa khadka tooska ah iyo khadka tooska ah.
Waxaa jiri kara xoogaa qalooca barashada ka hor intaadan helin dalabkan, laakiin markii aad sameyso waxaad u bogi doontaa u-habeyntiisa iyo dareenkeeda.
Fasalada jabi hoos ishaqada guriga, shaqada fasalka, imtixaanka, kaqeybgalka, ama qeybaha kale, lasocodka xaadiritaanka iyo xitaa helitaanka xusuusinta dhalashada ardayda iyo inbadan.
Si adag uma ahan dalab qiimeyn, laakiin haddii aad keydin doontid waraaqo badan oo darajo leh oo aad tijaabin doonto way fiicnaan doontaa inaad ka heli karto meel kasta.
Kuwani waa 10ka barnaamij ee qiimeynta dhibcaha ee cajiibka ah ee ka caawiya macallimiinta inay waqtiga ilaashadaan
Ka codso Hada Maamulaha Xisaabaadka (Plastics) Shaqada Shirkadda Dow Chemical - 2016
Isbarbardhigga Qiimaynta Hubinta Tayada Gudaha ee Barnaamijka Dhaqaalaha Guriga Kulliyadaha Waxbarashada ee Aagga Waqooyi-Galbeed ee Juquraafi-siyaasadeed, Nigeria.
Jaamacadda Fountain Barnaamijka Xafladda Shirka 8aad Jadwalka Dhacdooyinka | Faahfaahin Faahfaahin
Ka codso Hada Maamulaha Nolosha Shaqada Hay'ada Danish Refugee Council (DRC)
Qorista Taris La-taliye loogu talagalay Isuduwaha Guud ee Xiritaanka (Isweydaarsadayaasha Heat) 2018
100ka ugu sareeya ee la macno ah ee Imtixaanka JAMB 2021 CBT
Bachelor of Education Hoose (B.El.Ed.) Cusbooneysiinta Faahfaahinta Koorsada
Tags: barnaamijka buugaagta fasalka ugu wanaagsan macallimiinta dugsiga hoose, barnaamijka iskaanka xaashida xumbada, warqad xumbo bilaash ah, barnaamijka qiimeynta fasalka google, barnaamijyada fasalka ee ipad, barnaamijka Gracam, scanner xulasho badan, furaha degdega ah
« FUTO Toosi Galitaan Su'aalo Hore 2021 & Jawaabo PDF Download
Xariirka PTI www.portal.pti.edu.ng Hubi Cusboonaysiinta Codsiga Ugu Dambeeya »
Julaay 2021 Ducooyin xiiso leh oo ku saabsan Ilaalinta Dadka aad Jeceshahay
WAEC Su'aalaha Muunada 2021 iyo Qorshayaasha Dhamaan Mawduuca
Qorista Macallimiinta Kaduna 2021/2022 Eeg Xariirka Foomka Codsiga Ugu Dambeeya
Kireyaal Baabuur Jaban: Halkee Lagu Ijaaraa Gawaarida Tayada Qiimaha La Awoodi Karo 2021
Julaay 2021 Hambalyo Dhalasho Wacan oo Farxad leh iyo qof walba
Xariirka Shaqada ee Altara Credit Limited 2021 www.altaracredit.com
Foomka Codsiga ee Qorista Xaddidan ee Altara 2021/2022
Qorista Wema Bank Wema 2021/2022 Hubinta Xariirka Codsiga
Foomka Shaqaaleynta Ciidanka Cirka ee Nigeria DSSC 2021 www.airforce.mil.ng/apply-now
Dashboard qorista TSB 2021 Hubi Xaaladda Codsiga
Fiiri Kharashka Codsiga Visa ee Dhammaan Dalalka 2021 Cusboonaysiinta
nafrecruitment.airforce.mil.ng Xariirka Gelitaanka 2021 Tilmaamaha Codsiga
Hada Dalbo Codsi Qorista Ciidanka Cirka ee Nigeria DSSC 2021
Qorista Shaqaalaynta Nigerian Airforce DSSC 2021/2022 Eeg Xariirka Foomka Codsiga
WAEC GCE Sayniska Cilmiga Beeraha 2021 Hubi Muunada Buuxda
WAEC GCE Saamiga Fiisigiska 2021 Hubi Muunada Dhammaystiran ee Tababarka ah
Shuruudaha Gudiga Adeegga Gaaban ee Tooska ah (DSSC) ee loogu talagalay Para-military
Bogga Foomka Codsiga Shaqaalaynta Bangiga Dammaanadda ee Dammaanadda 2021/2022
Xariirka Shaqaalaynta ee Wema Bank Plc 2021 Booqo www.wemabank.com
Xariirka Gtbank Login Portal www.gtbank.com Hubi Cusbooneysiinta Shaqaalaynta 2021